प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार, केहि दिन अस्पतालमा रहने - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार, केहि दिन अस्पतालमा रहने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै गइरहेको छ । गत मंगलबार महराजगञ्जस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक एन्ड भास्कुलर सेन्टरमा एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया गराएका प्रधानमन्त्री ओली चिकित्सकको निगरानीमा रहँदै आएका छन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भइरहेको चिकित्सकले जनाएका छन । स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भए पनि डाक्टरको निगरानीमा राख्नुपर्ने भएकाले उहाँलाई अझै केही दिन अस्पतालको सघन उपचार कक्ष अर्थात् आईसीयूमै राखेर उपचार गरिने डाक्टरले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विहिबार स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार आएको भन्दै ट्वीट मार्फत शुभेच्छुकहरुलाई धन्यावाद ज्ञापन गरेका थिए ।
मनमोहन कार्डियो भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाहले स्वास्थ्यमा सोचे भन्दा राम्रो सुधार भएको जानकारी दिएकी छन् । डा. शाहले भनिन् ‘उहाँको घाउ निको हुन कम्तीमा १० दिन लाग्छ । त्यसैले अझै एकसातासम्म आईसियूमै राखेर उपचार गर्नुपर्छ ।’ ‘उहाँको स्वास्थ्यमा हामीले सोचेको भन्दा राम्रो सुधार भएको छ ।’